Iinkcukacha zesilayidi sokuqala.
Iinkcukacha zesilayidi sesibini.
Iinkcukacha zesilayidi sesithathu.
I-Goldenlaser igxile ekunikezeleni izisombululo ezikrelekrele, ezidijithali, kunye nezixhobo ezizenzekelayo zelaser.
Umenzi weenkqubo ze-laser zokusika, ukukrola nokumakisha. Yingcali CO2 laser ukusika umatshini , i- Galvo laser umatshini kunye laser yedijithali die ukusika umatshini .
Ukusuka kokubonisana kuqala ukuya kuvavanyo lwesicelo kunye nezinto zakho eziyilelwe kumzi mveliso othile kuqeqesho lwabasebenzisi nakwinkonzo yehlabathi-iGoldenlaser ibonelela ngezisombululo ezibanzi zelaser, hayi umatshini omnye kuphela!
CO2 laser mgawuli
CO2 GALVO KWI-Laser
UMBONO WOKUSETYENZISWA KWE-laser
Laser afe umsiki
Umzekelo No .: JMCCJG / JYCCJG Series
Isantya esiphakamileyo soMatshini weeMpahla eyolukiweyo iLaser Cutting Machine
Olu luhlu CO2 flatbed laser ukusika umatshini yenzelwe rolls eyolukiweyo ngokubanzi kunye nezinto ezithambileyo ngokuzenzekelayo nangokuqhubekayo ahlabayo. Iqhutywa zii-rack kunye ne-rack nge-servo motor, umsiki we-laser unikezela ngesona santya siphezulu sokukhawulezisa kunye nokukhawulezisa.
Umzekelo No .: JMCCJG-350400LD
Umatshini wokuHluza ilaphu lokusika iLaser
Ukuchaneka okuphezulu kwezixhobo kunye nokuqhutywa kwirack. Isantya sokusika ukuya kuthi ga kwi-1200mm / s. CO2 RF laser 150W ukuya 800W. Umshini inkqubo yokuthutha. Isondli esizenzekelayo ngokulungiswa kwempixano. Ifanelekile ukusika ilaphu lokucoca ulwelo, amacwecwe okucoca ulwelo, ipholiyesta, i-PP, i-fiberglass, i-PTFE kunye neendwangu zeshishini.
Umzekelo No .: JMCZJJG (3D) -250300LD
Yengubo Air Duct Laser Cutting Matshini
Indibaniselwano ifomathi enkulu X, Y axis laser ukusika (yokucheba) kunye ngesantya esiphezulu Galvo laser perforating (laser imingxuma cut). Yenzelwe ukusika ilaphu lokungenisa umoya elukiweyo
Umzekelo No .: JYCCJG-1601000LD
Umatshini wokusika weLaser weLaser elide
Ibhedi yokuSika iimitha ezili-10 ukuya kwi-13 yeemitha ubukhulu beebhedi zezinto ezongezelelweyo ezongezelelweyo, ezinjengentente, i-seachloth, iparashute, iparaglider, i-canopy, i-marquee, i-awning, i-parasail, i-sunshade, iikhaphethi zokuhamba ...
Umzekelo No .: JMCZJJG (3D) 170200LD
Galvo & Gantry Laser mfanekiso Cutting Machine for Textile, Ithwathwa
Le nkqubo laser idibanisa galvanometer kunye XY gantry. I-Galvo ibonelela ngesantya esiphezulu sokukrola, ukutyeba, ukugcoba nokusika izinto ezincinci. I-XY Gantry ivumela ukuqhubekeka kweprofayili enkulu kunye nesitokhwe esityebileyo.
Umzekelo No .: ZJJF (3D) -160LD
Qengqeleka ukuba uqengqe umatshini weLight Laser Umatshini
Inkqubo ye-3D enamandla ye-Galvo, egqiba ukukrola okuqhubekayo kwinqanaba elinye. "Kubhabho" itekhnoloji ye-laser. Ifanelekile ifomati enkulu yelaphu, eyolukiweyo, yesikhumba, yedenim, i-EVA nokukrola.
Umzekelo No .: ZJ (3D) -9045TB
Isantya esiphakamileyo seGalvo Laser Umatshini wokukrola weSikhumba seSikhumba
I-CO2 RF yentsimbi ye-laser 150W 300W 600W. Inkqubo yolawulo lwamandla e-galvanometer ye-3D. Zenzekelayo phezulu nasezantsi kwe-axis Z. Oluzenzekelayo shuttle zinc-intsimbi ingxubevange lobusi yokusebenza itafile.
Umzekelo No .: ZJ (3D) -15050LD
Umatshini wokusika weGalvo Laser oCoca ii-Discs ze-Sandpaper
Indawo enkulu yokuskena i-galvanometer. Imithombo emininzi ye-laser yokunyusa imveliso. Ukutya okuzenzekelayo kunye nokubuyisela umva - isithuthi…
Umzekelo No .: CJGV-160130LD
Sublimation Ilaphu Laser umsiki for zemidlalo
Vision laser ilungele ukusika yoshicilelo yedijithali amalaphu textile zonke iimilo kunye nobukhulu. Iikhamera ziskena ilaphu, zibone kwaye ziqaphele into eshicilelweyo, okanye zithathe amanqaku obhaliso aprintiweyo kwaye zisike uyilo olukhethiweyo ngesantya nangokuchaneka.
Umzekelo No .: QZDXBJGHY-160100LDII
Independent Dual Head Camera Laser Cutting Matshini
Inkqubo iintloko ezimbini laser ukusika ezimeleyo idityaniswe ngokugqibeleleyo nenkqubo umbono smart, kwaye ngakumbi eliphezulu kwiimfuno processing yemizobo eprintiweyo.
Umzekelo No .: I-MZDJG-160100LD
I-GoldenCAM yokuBhaliswa kweKhamera yeLaser umsiki
Ukuchaneka okuphezulu kokubhaliswa kwamanqaku ekubekweni kunye nembuyekezo yokukhubazeka okrelekrele wokusika ngokuchanekileyo i-laser yoshicilelo lwedayi, iilogo kunye namanani.
Umzekelo No .: I-CJGV-320400LD
I-laser cutter enkulu yombono ngokukodwa yishishini lokuprinta kwidijithali-ukuvelisa amandla angenakuthelekiswa nanto ekugqibezeni ifomathi ebanzi eprintiweyo yedijithali okanye yedayi-sublimated graphic textile, iibhena kunye neempawu ezithambileyo.
Umzekelo No .: LC350
Roll ukuya kwiLaser Cutting Machine yeFilimu kunye neTape
Isantya esiphezulu senkqubo yokufa yokusika ye-laser. Iimodyuli kunye nemisebenzi emininzi iyilo-in-nye. Sebenzisa i-CO2, i-IR okanye i-UV ye-beam yokuhambisa ukubonelela ngamagunya ohlukeneyo kunye nobude bebude. Ukulungele ukurola ukusika iifilimu zomsebenzi ophezulu, iiteyiphu kunye nezinto zokubambelela.
Umzekelo No .: LC-350
Qengqeleka ukuba Roll Label Laser Die Cutting Matshini
I-laser yokusika kunye nesisombululo esiguqula ukugqitywa kwelebheli. Umfundi wekhowudi ye-QR uxhasa utshintsho oluzenzekelayo kubhabho. Isikhokelo seWebhu senza ukungasebenzi kunye nokubuyisela umva ngokuchanekileyo ngakumbi.
Umzekelo No .: LC-230
Ileyibhile Laser Die Ukucanda Matshini
I-LC230 yicompact, yezoqoqosho kunye neyedijithali ngokupheleleyo yokugqiba umatshini ngobubanzi bewebhu obungama-230mm. Lukhetho oluhle kakhulu lokubaleka ngokufutshane kwidijithali. Ukunikezela ngotshintsho olungaphezulu kwexesha kwaye akukho ndleko yeplate yokufa.
Sigxile laser ukusika kunye nokukrola izisombululo kuluhlu olubanzi lwezicelo. Nazi ezinye zezicelo esihlala sisebenza nazo.
Khetha ishishini lakho: ezona zisombululo zilungileyo ze-laser zikulungele.
Ngobuchwephesha obunamandla bokuyila, iGolden Laser iyakwazi ukubonelela ngoomatshini be-laser kunye nezisombululo, yenza imveliso yakho isebenze ngakumbi kwaye ibe yinzuzo.
Njengobuchwephesha bokwenza i-epoch-technology, i-laser ikhula ngeenzuzo ezingenakuthelekiswa nanto, ithathe indawo yeenkqubo zemveli ngakumbi nangakumbi.
Iinkqubo zeLaser zeNkqubo
zeLaser zeNgcaciso zeNgcaciso
ngeGolder Laser (ifayile yePDF)
Soloko unika inkxaso ngenkonzo. Iinjineli ziyafumaneka koomatshini beenkonzo phesheya kolwandle ngenkonzo yofakelo, inkonzo yoqeqesho kunye nenkonzo yolondolozo.
Jonga apha ngolwazi malunga nomzi mveliso ofanelekileyo kunye neendaba zethu zamva nje kunye neziganeko.
I-Laser Cut Sublimation Masks ibe yinxalenye yeSimbo
Xa kuziwa ekudaleni imaski ye-sublimation yesiko, umsiki we-laser unokuba yinxalenye ebalulekileyo yokwenza ezi ziqwenga zinesitayile. Nazi ezinye iimbono malunga nendlela onokuyisebenzisa ngayo le teknoloji intsha…
Ukusika Ilaphu leSihluzo ngeLaser kuMgangatho wePrimiyamu
Uninzi lwabavelisi bamalaphu okucoca batyale imali koomatshini bokusika i-laser yodidi oluphezulu ukusuka kwi-goldenlaser, ngaloo ndlela belungisa ilaphu lokucoca ngokweemfuno ezifunwa ngumthengi ngamnye kunye nokuqinisekisa uguqulo olukhawulezayo lokuphendula…
Umatshini weLaser uququzelela ukuSikwa kweVinyl yoThutho lobushushu
Omnye wemisebenzi egqwesileyo ngumsiki welaser kukusika iVinyl yokuhambisa ubushushu engahlawulelwanga yiPVC. I-Laser iyakwazi ukusika imizobo eneenkcukacha kakhulu ngokuchaneka okukhulu. Emva koko imizobo ingafakwa kwisambatho ngoxinzelelo lobushushu ...
Imveliso eQinisekisiweyo • Ukuzingela ngokuGqwesileyo
Isisombululo seLaser soMboneleli oPhambili
Ngamava eminyaka engama-20 kushishino laser, ngokuqhubekekayo ekuphuhliseni nokusebenzisa iiteknoloji phambili, Goldenlaser iye yaba umenzi phambili koomatshini laser kunye nokwenza ulwenziwo ephucukileyo.
> Jonga oomatshini be-laser
IGoldenlaser ikunika izisombululo zelaser ezinobungcali kwishishini lakho lesicelo-ukukunceda wandise imveliso, yenza lula inkqubo yokuqhubekeka kwaye wenze inzuzo engaphezulu.
> Jonga izisombululo ze-laser
Kwimarike yaphesheya, uGoldenlaser useke uthungelwano lokuthengisa oluqolileyo kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla kwihlabathi liphela, kunye neemveliso zethu ezikhuphisanayo kunye nenkqubo yokuyila eyenzelwe ukuthengisa.
> Funda ngakumbi malunga neGoldenlaser
Ilungelo lokushicilela © 2005-2021 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Onke amalungelo agciniwe.